China Sodium Perchlorate fekitori uye vagadziri | YANXA
Sodium perchlorate ndiyo inorganic komputa nekemikari fomati NaClO₄. Iyo chena crystalline, hygroscopic solid iyo yakanyunguduka kwazvo mumvura uye nedoro. Iyo inowanzo sangana seye monohydrate.
Sodium perchlorate isimba ine oxidizer, asi hazvo isingashande mu pyrotechnics se potassium munyu nekuda kweiyo hygroscopicity. Inoita neyakaoma mineral acid, senge sulfuric acid, kugadzira perchloric acid.
Zvishandiso: zvinonyanya kushandiswa mukugadzira imwe pechlorate kuburikidza nekaviri-kuora maitiro.
1) sodium perchlorate, isina mvura
Sodium perchlorate isimba ine oxidizer. Iyo inofanirwa kuchengetwa kure ne organic zvinhu uye zvine simba ekuderedza vamiririri. Kusiyana nemaklorati, pechlorate misanganiswa nesarufa haina kugadzikana.
Iyo zvine chepfu zvine chepfu, sezvo muhuwandu hwakawanda inopindira kutora iodine mune yegland gland.
NaClO4 inofanirwa kuchengetwa mumabhodhoro akasungwa akasungwa sezvo iri zvishoma hygroscopic. Inofanirwa kuchengetedzwa kure nechero yakasimba asidi mhute kudzivirira kuumbwa kweanhydrous perchloric acid, moto uye kuputika njodzi. Inofanirawo kuchengetedzwa kure nezvinhu zvinotsva.
Sodium perchlorate haifanire kudururwa pasi mupombi kana kukandwa munzvimbo. Inofanira kunge isina kusiyaniswa neyekuderedza mumiririri kuNaCl kutanga.
Sodium perchlorate inogona kuparadzwa nesimbi yesimbi pasi pechiedza cheUV, pasina mweya.
Pashure: DDI (Dimeryl Diisocyanate)
Atomized idenderedzwa Magnesium chiwanikwa upfu